ဂူဂဲလ်အယ်လဂိုရီသမ်တွင်အဆင့် ၂၀၀ အချက်များ | Martech Zone
Google Algorithm တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 200
အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 4, 2013 Douglas Karr
ကောင်းပြီ, ဒါကရန်မလွယ်ကူသောလုပ်ရပ်ပေမယ့် kudos ဖြစ်ပါတယ် Backlinko နှင့် နေခြည် ဂူဂဲလ်ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုခွဲခြားရန်ရည်ရွယ်သောဒီအချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုစည်းထားခြင်း သတင်းအချက်အလက်များသည်ဒိုမိန်းအချက်များ၊ စာမျက်နှာအဆင့်အချက်များ၊ site-level အချက်များ၊ backlink အချက်များ၊ အသုံးပြုသူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ အညွှန်းကိန်းများနှင့်လူမှုရေးအချက်ပြမှုများကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ သူတို့တစ်တွေလျှောက်ထားမဟုတ်ပါဘူးကတည်းက အလေးချိန် တစ် ဦး ချင်းစီအကြောင်းအချက်များ,
ငါစာရင်းကိုနစ်ခ်ျသွားမည်မဟုတ် ... ငါသက်ရောက်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အားလုံးမယုံပေမယ့်နေဆဲကလစ် - မှတဆင့်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မရှိကြဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် - သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်သင်စဉ်းစားရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဇွန် 4, 2013 မှာ 10: 18 pm တွင်
အလွန်ပြည့်စုံသောစာရင်း။ SEO plugins များသည်အထက်ဖော်ပြပါအရာများနှင့်အဘယ်ကြောင့်အများစုပေါင်းစပ်ထားကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, SEO Presser ။ ဒီအဆင့်အားလုံးအချက်များအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဇွန် 4, 2013 မှာ 11: 17 pm တွင်
တစ် ဦး ကအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့စာရင်း! အံ့သြဖွယ်အားထုတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
6:2013 pm မှာဇွန် 7, 50
မဟာအရင်းအမြစ် Doug! ငါ bookmark တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မည်! ဆိုက်အဆင့်အချက်များအပိုင်းတွင်ထပ်တူအကြောင်းအရာအတိုအထွာတွင်“ ထပ်တူအကြောင်းအရာ” ရှိသည်။ it အဲဒါကိုပြင်ချင်တယ်။
13:2013 pm မှာဇွန် 7, 17
ဒီအလွန်သိကောင်းစရာများ infographic များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်တစ်ခု (Jacquelyn ပြီးသားတင်ထားသည့်အရာမှ လွဲ၍) -“ Time on Site” အောက်ရှိအတိုအထွာကိုသင်လဲပြောင်းချင်လိမ့်မည်။
စက်တင်ဘာ 6, 2013 မှာ 1: 10 AM
ကောင်းတဲ့ infographic ဓာတ်ပုံ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်သော့ချက်စာလုံးကို အသုံးပြု၍ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်၎င်း၏ URL ကိုအမည်ပေးပါ။ သင် ... သင့်တယ်
၎င်းကိုသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ခေါင်းစဉ်၊ ဖော်ပြချက်နှင့် meta tag များတွင်လည်းသုံးပါ။
အချို့ကယနေ့တွင် Google သည် meta tag များအတွက်နောက်တဖန်မကြည့်တော့ဟုပြောကြသည်
27:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 26
27:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 46
10:2015 pm မှာအောက်တိုဘာ 11, 48
Wow အခုဒီဆောင်းပါးကိုဂူဂဲလ်မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ Marketing Tech Blog ကိုအရမ်းဂရုစိုက်ဖို့အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။